စစ်တပ်က စီးပွားရေး မလုပ်သင့်ကြောင်း လွှတ်တော်တွင် တင်ပြဆွေးနွေး | ဧရာဝတီ
စစ်တပ်က စီးပွားရေး မလုပ်သင့်ကြောင်း လွှတ်တော်တွင် တင်ပြဆွေးနွေး
ခင်ဦးသာ| January 17, 2013 | Hits:5,140
4 | | ၂၀၁၂ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ ညနေက ရန်ကုန်မြို့ရှိ စစ်တပ်ပိုင် ဦးပိုင် လီမိတက်ရှေ့တွင် လက်ပံတောင်း သပိတ် အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်းမှုအတွက် ဆန္ဒပြပြီး တောင်းဆိုချက်များ ထုတ်ဖော်စဉ် (ဓာတ်ပုံ – ကောင်းညီဟန် / ဧရာဝတီ)
အစိုးရ တပ်မတော်အနေဖြင့် စစ်တပ်ပိုင် စီးပွားရေး၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့် ကုန်ထုတ်ရေး လုပ်ငန်းများအား ရပ်ဆိုင်းသင့်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်၌ တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ပဉ္စမကာလတို ၅ နှစ် အမျိုးသားစီမံကိန်း (၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆) နှစ်အထိ ၅ နှစ် စီမံကိန်းများအတွက် ရေးဆွဲထားရာတွင် စစ်တပ်၏ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအများအပြား ပါဝင်နေခြင်းကြောင့် စစ်တပ်အနေဖြင့် စီးပွားရေး မလုပ်သင့်တော့ကြောင်း ယမန်နေ့က အကြံပြုဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း အမျိုးသား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ ဗညားအောင်မိုးက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
တပ်မတော်သည် ကာကွယ်ရေး ဘတ်ဂျက်အပေါ် မီခိုခြင်း မရှိစေရန် တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်များရှိ တပ်ရင်းများ၊ တပ်ခွဲများသည် တအုပ်တမ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ တနိုင်ငံတပိုင်အထိ မိမိတို့တပ်ရင်းတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး စသည့်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြရန်အတွက် တပ်မတော်၏ အကျိုးစီးပွား လုပ်ငန်းများကို ပဉ္စမ ၅ နှစ် ကာလတို စီမံကိန်းတွင် ထည့်သွင်း ရေးဆွဲထားသည်။
ထို့အတူ တမျိုးသားလုံး၏ အသားတင်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု တန်းဖိုး (GDP) တိုးတက်ရန်အတွက် သားငါးကဏ္ဍနှင့် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများကို တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်များ အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ရေး စီမံကိန်းများ ချမှတ်အကောင် အထည်ဖော်ရန်လည်း လမ်းညွှန်ထားသည်။
တပ်မတော်၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ပြည်သူများ ပိုင်ဆိုင်သော လယ်ယာမြေများကို တနိုင်ငံလုံးနီးပါးတွင် သိမ်းယူထားကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ပြည်သူများ၏ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ကျဆင်းခြင်း၊ ဒုက္ခဆင်းရဲ ခံနေကြရခြင်း၊ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ် ပွားနေခြင်း စသည့် အကျိုးဆက်များ ခံစားနေရကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် စစ်တပ်အနေဖြင့် ပြည်သူကို အကျိုးမပြုသည့် လုပ်ငန်းများကို မလုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း ဒေါက်တာ ဗညာအောင်မိုးက ပြောသည်။
“စစ်တပ်ဆိုတာ စီးပွားရေး လုပ်စရာ မလိုဘူး။ လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ စစ်တပ်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေဟာလည်း အရာရှိတွေပဲ အကျိုးခံစားရပြီးတော့ ရဲဘော်တွေ မခံစားရဘူး။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း မရှိရင် စစ်တပ်အသုံးစရိတ်ကို အစိုးရက တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးရမှာပေါ့။ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဒီလိုပဲ လုပ်ကြတာပါ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
လက်ရှိတွင် စစ်တပ်ပိုင် စီးပွားရေးဦးပိုင် လီမီတက် အပါအ၀င် စစ်တပ်က လုပ်ဆောင်နေသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံများမှ ရရှိသော ၀င်ငွေများကိုလည်း နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက်တွင် ထည့်သွင်းပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း ၎င်းက အကြံပြု ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
“လိုက်နာတာ မလိုက်နာတာ သူတို့အပိုင်းပေါ့။ ကျနော်က ပြည်သူချစ်တဲ့၊ ပြည်သူအားထားရတဲ့ ပြည်ထောင်စု တပ်မတော် ဖြစ်စေချင်လို့ပါ။ အရင်က အမူအကျင့်တွေ မရှိစေချင်တော့ဘူး။ ခေတ်လည်းပြောင်းနေပြီ။ ပြည်သူသည်သာ အမိ၊ ပြည်သူသည်သာ အဖ ဆိုတာမျိုး ဖြစ်သင့်ပြီ” ဟု ဒေါက်တာ ဗညားအောင်မိုးက ဆိုသည်။
တပ်မတော်အား အဂတိလိုက်စားမှု မရှိရေး၊ တပ်မတော်သာ အမိ၊ တပ်မတော်သာ အဖဟူသော စကားကို ပယ်ဖျက်ရေး၊ ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွား ထိခိုက်မည့် ကိစ္စများ မလုပ်ဆောင်ရေး၊ ပြည်သူကို ကာကွယ်ပေးရေး၊ ပြည်ထောင်စု တပ်မတော်ဖြစ်ရေး စသည့် အချက်များကို ထောက်ပြဆွေးနွေးရာ စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်များက တုံ့ပြန်ဆွေးနွေးမှု မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
ဒေါက်တာ ဗညားအောင်မိုး၏ ထောက်ပြဆွေးနွေးမှုများသည် အများပြည်သူ ကောင်းမွန်ရေးအတွက် ပြောဆိုမှုဖြစ်၍ လက်ခံသင့်ကြောင်း၊ သို့သော် စစ်တပ်က မည်မျှလိုက်လျှော လက်ခံပေးမည်ကို စောင့်ကြည့်ရဦး မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘရှိန်က ဆိုသည်။
တပ်မတော်သည် တပ်တွင်းမိသားစုများ စားဝတ်နေရေးအတွက် တနိုင်တပိုင် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး လုပ်ဆောင်သည်ကို နားလည်ပေးသင့်သော်လည်း ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် ပြည်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်သည့် လယ်မြေများကို အဓမ္မ သိမ်းယူခြင်းကို လက်မခံကြောင်း၊ ၎င်းတို့ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် တနိုင်ငံလုံးမှ သိမ်းယူထားသည့် လယ်ယာ၊ ဥယာဉ်ခြံမြေများကို မူလပိုင်ရှင် ပြည်သူများထံ ပြန်ပေးရေးအတွက် လွှတ်တော်က ကြိုးပမ်းသွားမည်ဟု ဦးဘရှိန်က ဆိုသည်။
စစ်တပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အများအပြား လုပ်ကိုင်နေသည့်အပြင် နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက်၏ ရာခိုင်နုန်း ထက်ဝက်နီးပါးကိုလည်း သုံးစွဲနေခြင်းကြောင့် ပြည်သူများအတွက် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်စေကြောင်း ကိုယ်စားလှယ်များက ပြောသည်။
ဦးနေ၀င်းအစိုးရ လက်ထက်မှ န၀တ၊ နအဖ အစိုးရအဆင့်ဆင့် သုံးစွဲခဲ့သည့် စစ်တပ်အသုံးစရိတ်သည် နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက်၏ ထက်ဝက်နီးပါး ရှိသော်လည်း ပြည်သူထံ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာမှု မရှိခဲ့ပေ။ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၂-၁၃ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာာရေးနှစ်တွင် စစ်သုံးစရိတ်ကို နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်၏ ၁၄ ဒသမ ၃၉ ရာ ခိုင်နှုန်းသုံးစွဲရန် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က အတည်ပြုပေးခဲ့ပြီး ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် ၂၁ ရာခိုင်နှုန်း တောင်းခံထားကြောင်း သိရသည်။
စစ်အသုံးစရိတ်ကို နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက်၏ ၂၁ ရာခိုင်နှုန်း တောင်းခံ
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment ကိုတောသား January 17, 2013 - 6:30 pm	စစ်တပ်က ဘာစီးပွားရေးမှ လုပ်စရာမလိုဘူးဆိုတာ လူတိုင်းသိပါတယ် နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျတ်လည်းသုံးတယ် စီးပွားရေးလည်းလုပ်တယ် သူတိူ့စီးပွားရေးလူပ်လို့ရတဲ့ အကျိူးအမြတ်ကို လည်း ရှင်းပြတာမရှိဘူး နိုင်ငံတော်ကို ဘာမှအကျိုးမပြုတဲ့ ဘူဇွာလူတန်းစား တပ်မတော်ရဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ရပ်တန်းက ရပ်သင့်ပါပြီ
Reply	ဇေယျကျော်သူ January 17, 2013 - 7:30 pm	သူတို့ကဦးပိုင်ကနေ ဘိုးဘွားပိုင်လို့နာမည်ပြောင်းသွားအုံးမယ်
Reply	စစ်သည် January 17, 2013 - 7:30 pm	good
Reply	swe htwe January 17, 2013 - 11:57 pm	Tatmataw must be only for defense. Army should not do any business. Instead army should behave to be admired by citizens. To be modernised army,many reforms must be done. We think army should follow hluttaw ‘s decision. It is our desire.
Reply	မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ January 18, 2013 - 3:13 am	အုပ်ချုပ်ပုံ နည်းစနစ်ကောင်းတဲ့ တိုင်းပြည်တွေက စနစ်တွေကို အတုယူသင့် ယူရပါမယ်။ ပြည်သူတွေဆီက ၀င်ငွေခွန်ကို အမှန်တကယ် စနစ်တကျ ကောက်ရပါမယ်။ အိမ်မြေ ပိုင်ဆိုင်သူတွေဆီက အိုးအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အခွန် တကယ် ကောက်ရပါမယ်။ ပထမအိမ်ကို မကောက်ချင်နေပါ။ အိမ်တလုံးထက် ပိုပိုင်တယ်ဆိုတာ ပိုဝယ်နိုင်လို့၊ အပို ၀င်ငွေရှိတာမို့ ထို အိမ်အပိုများကို အခွန်ကောက်ရပါမယ်။ ထိုငွေများမှ တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာများမှ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေ လစာ ပေးရမှာပါ။ စစ်တပ်ဆိုတာလဲ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း (အစိုးရ၀န်ထမ်း) မို့ တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာမှ လစာများ ပေးရမှာပါ။ စစ်တပ်အတွက်၊ တပ်မတော်သားများအတွက် ကိုယ့်ဘာသာ ၀င်ငွေရှာစရာ မလိုပါ။ အမှုထမ်းစဉ် တပ်ထဲမှ နေအိမ်မှာ အလကားနေပြီး လစာရတာနဲ့ လောက်ငအောင် နေရမှာပါ။ သူဌေးဖြစ်လိုသူများ စစ်တပ်ထဲ မ၀င်ပါနဲ့၊ စစ်ဗိုလ် မလုပ်ပါနဲ့။ စီးပွားရေးလုပ်ပါ။ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုး (တိုင်းရင်းသား အားလုံး) ကို လူတန်းစား မခွဲခြားပဲ တန်းတူ စေတနာထား ကာကွယ်လိုသူများသာလျှင် စစ်တပ်ထဲ ၀င်သင့်ပါတယ်။ (ခြွင်းချက်၊ ရည်းစားနဲ့ ကွဲသူများက လွဲလို့ပေါ့လေ)
Reply	Salai Lian January 18, 2013 - 10:55 am	I agree with you. Military must not expect or receive special treatment. Military(Defense Ministry) must be just one of the ministries. Granting special opportunities to military is undemocratic and unacceptable. If Burma has these kinds of law, Hlutdaw needs to amend on that law. No ministry is superior than others. All ministers must have the same power to execute their duties equally. All ministries must be under the president executing businesses according to the Hlutdaw’s mandate. Allowing military to have the lion’s share is absolutely serious virus which can kill the country’s future. Burma is no longer like communist China or N Korea or Vietnam. They are communists but we are democrats. I love your comment, Myanmar Ethnic Girl(Myanmar Taing-yin-thu).
Reply	Golden Owl January 18, 2013 - 4:43 am	As long as Burmese military is receiving the lion’s share, the government of Thein Sein is questionable. Defense Ministry is supposed to be just one of the ministries. Currently, defense ministry is above the government which makes our country really looks really ugly. All ministries are supposed to be under the executive branch. Executive branch, Legislative branch and Judicial branch must respect checks and balances. So far, executive branch and judicial branch are weak. Legislative branch is not respectable since many of them do not represent the people. I do not mean the executive branch represents the public fully. The foundation of the Burmese government structure itself was based on one man, Than Shwe. Reform is badly needed.
Reply	Salai Lian January 18, 2013 - 6:19 am	Government, all branches of the government, must not compete with private sectors. Military must depend on the budget provided by the government. Especially, in the time of war and in the time of emergency, the government can do amendment on the budget. But, in the time of peace, Burma does not need hundreds of thousands of soldiers for active duty. Burma must abandon its previous philosophy of building the military nation. We had suffered enough from 1962 to today because of extremely high expense for unwise military policy. Since, no nation will invade sovereign Burma, the numbers of soldiers must be reduced to half of today’s size. Military has been killer virus to the national development. Instead, government must invest more in education, healthcare, agriculture and other economy related sectors. Allowing military to run their own companies? What an unacceptable way of running the Union of Burma?
Reply	Anyar Thar January 18, 2013 - 11:27 am	This time, every comment is strongly sticking together against wrong policy of the Burmese junta. Whatapeople! This is what we call “United People’s Voice”. Shalom!
Reply	Wisperman January 18, 2013 - 11:51 am	လုံးဝထောက်ခံပါတယ်။ စစ်တပ်က စီးပွားရေးမလုပ်သင့်တော့ဘဲ နိုင်ငံ့ကာကွယ်ရေးတစ်ခုထဲကိုသာ လုပ်သင့်ပါတယ်။
Reply	Chinlay January 18, 2013 - 2:02 pm	It isagood sign and the progress of ideology among Myanmar people.
Reply	sac longchamp tote January 19, 2013 - 1:06 am	I accept as true with your assumed. Thank you to your sharing.